माइतीघर मण्डला र जुम्ला घटनामा सरकारबाट ज्यादती भयो : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठक स्थगन गरिएकामा असन्तोष प्रकट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संघीय संसद् भवन बाहिर सूचना टाँस गरी आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ११ गते शुक्रबारसम्मका लागि सारिएको छ ...
‘सरकारलाई सचेत गराउन सडकदेखि सदनसम्म कांग्रेस आन्दोलन’
हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारका विभिन्न गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सचेत गराउन कांग्रेस अव सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन् । नेकपा सरकारको विभिन्न तानाशाही प्रवृत्तिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन र सरकारलाई सच ...
प्रधानमन्त्री ओली विमानस्थल निरीक्षण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुहुँदै । साथमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलगायत । तस्बिर: हरि वास्तोला +
Page 1 out of 958
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठक स्थगन गरिएकामा असन्तोष प्रकट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संघीय +
प्रमुख समाचार शहीदचोकमा ट्राफिक लाइट राखिँदै
भरतपुर । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नारायणगढको शहीदचोकमा ट्राफिक लाइट राखिने भएको छ । सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन भरतपुर महानगरपालिकाले ट्राफिक +
चिसापानीमा सर्पदंशको उपचार
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको चिसापानी अस्पतालले सर्पदंशको उपचार सेवासमेत शुरु गरेको छ। यस क्षेत्रको आवश्यकतालाई महसुस +
कानुनमन्त्रीको हातबाट जुस पिएर गंगामायाले अनसन तोडिन
डा. केसीलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा सरकार, वार्ता निष्कर्षविहिन
डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइँदै
सांसद म्याथु अफोर्डसंग गोर्खा अगुवाहरुको भेट
हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारका विभिन्न गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सचेत गराउन कांग्रेस अव सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन् । नेकपा सरकारको विभिन्न तानाशाही प्रवृत्तिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन र सरकारलाई सचेत गराउन यही साउन १५ गते देशैभर विरोधको कार्यक्रम तय +
काठमाडौं । आगामी तीन दिनसम्म देशका मध्य तथा पश्चिमी भेगका केही स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना +
विद्यार्थी कुटिएको हेर्न सक्दिनँ, काठमाडौं जान्छु : डा. केसी
जुम्ला । सरकारले आफ्ना समर्थक विद्यार्थी माथि धरपकड शुरु गरेपछि अनसनरत डा. गोविन्द केसी काठमाडौं +
डा. केसीका समर्थक र प्रहरीबीच झडप, दुई दर्जन बढी घाइते
जुम्ला । जुम्लामा २० दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन सरकारले हेलिकोप्टर पठाए पनि +
गायिका आनी छोइङद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई एक करोड हस्तान्त्रण
काठमाडौं। लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक जागरणका अभियानहरुको ढुकढुकी बन्दै आएको ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ अब नेपथ्य ब्याण्डको म्यूजिक भिडियोका रुपमा तयार भएको छ । श्याम तमोटले लेखेको ‘संकल्प गीत’ का रुपमा लोकप्रिय यस सिर्जनालाई यो ब्याण्डले एक दसकभन्दा अघिदेखि उसका हरेक जसो कन्सर्टहरुमा +
एनआरएनको पहलमा अमेरिका जान हिडेका दुई नेपालीको नाइजेरियाबाट उद्दार
एनआरएन जाम्वियाले फैलायो सहयोगी हात
कांग्रेस नेता विष्ट बेलायतमा सम्मानित
नेपाल हाउस सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सगुन र एनआरएन युके बीच हस्ताक्षर
सतिदेवी ढकाल, अध्यक्ष, मनकामना कृषि सहकारी, कोहलपुर सहकारी र राजनीतिमार्फत समाज परिवर्तनमा होमिएकी सतिदेवी ढकाल नेपाली समाज घरेलु हिंसाको नमुना बनेको बताउँछिन् । हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र पहुँच हुनुपर्ने मान्यता उनको छ । उनले बाँकेको कोहलपुरमा कृषि सहकारी सञ्चालन गरेकी छन् । सो सहकारीले +
यूकेमा धेरै नेपाली महिला पीडित छन्
रुखबिनाको जीवन अधुरो, प्रेमबिनाको जीवन मधुरो
म बाहुनकी छोरी लिम्बूको छोरासँग विवाह गरें
प्रमोदराजको गीतमा युकेको सुन्दर दृश्य
काठमाडौं । दुई बर्ष अघि बजारमा आएको गायक प्रमोदराज न्यौपानेको गीत ‘भेट भयो तिमीसँग’ बोलको गीतको भिडियो तयार भएको छ । दुई बर्ष अघि 10
उपत्यकाका फिल्म हलमा बक्स अफिस प्रणाली सुरु
म्याग्दीमा भानु जयन्ती मनाईयो
इटालीको ट्रेण्टो प्रदेशको ऐतिहासिक रोभेरेटो शहरस्थित बेल अफ द फलन भनिने घण्ट अर्थात मारिया डोलेन्स्मा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । यही जुन २४ 10
काठमाडौं । बेलायातको लर्ड्समा हुने एमसीसी, नेदरल्याण्ड् सम्मलित त्रिकोणात्मक श्रृखंला र नेदरल्यान्ड्विरुद्ध हुने एक दिवसिय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न जाने नेपाली टोलीलाई आज विदाई गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत
यूरोप टुरपछि शक्तिले क्रिकेट खेलबाट सन्यास लिने
एम्बाप्पेले विश्वकपमा कमाएको सबै रकम अशक्त बालबालिकाको उपचारमा खर्च गर्ने
International Yoga Day was celebrated organising walking in the park, practice of yoga, talks and discussion in Reading on Saturday under the joint auspices of Greater Reading Nepalese Community Association and Yoga group Reading. International Yoga Day (IYD) is being celebrated across the globe on 21st June since 2015 after the United Nations declared this day as Yoga Day in
A cooked travel agent was sentenced to more than two years in prison after he was found guilty of defrauding